IWits ejaha iChiefs isayinise isibabuli somgadli
UMGADLI waseCameroon u-Eva Nga omenyezelwe yiBidvest Wits njengomdlali wayo omusha. Isithombe: Twitter/@BidvestWits
INKINGA yokuntula amagoli kwiBidvest Wits ingase yelapheke ngemuva kokusayinisa umgadli waseCameroon, u-Eva Nga, omenyezelwe ngoLwesithathu emini.
UNga (26) ubegijima kwiClube de Desportos da Costa do Sol lapho eshaye khona amagoli awu-24 ngesizini edlule waphinde waba ngumdlali ovelele eligini yaseMozambique.
Ekhuluma ngalo mdlali esitatimendeni umqeqeshi weBidvest Wits uGavin Hunt uthe uyayithanda indlela adlala ngayo.
“Sekunesikhathi ngibuka u-Eva, ngiyakuthanda engikubonayo. Ubengumgadli ohamba phambili ngamagoli kwiligi yaseMozambique. Sizobona kuhamba kanjani ngapha,” kusho uHunt.
IWits ithwele kanzima phambili kule sizini njengoba umgadli wayo ohamba phambili, uGift Motupa esashaye amagoli amane kuphela emidlalweni yeligi.
Angu-18 kuphela esewonke emidlalweni yeligi engu-12 amagoli asashaywe yiWits kanti isivusise ayisishiyagalombili.
Isikhulu esiphezulu seWits, uJonathan Schloss, sithe bajabule kakhulu ngomgadli wabo omusha.
“Ungumgadli omuhle esikholwa ngukuthi uzokhula kahle eqenjeni lethu. Nakanjani uzoqinisa uhlu lwezikhali zikaGavin Hunt phambi kwepali futhi siyakholwa wukuthi uzoqhubeka enze okufanayo nabekwenza eMozambique,” usho kanje.
IWits isele neMamelodi Sundowns emaqenjini amele iNingizimu Afrika kwiCaf kule sizini. Ibalwa namaqembu ajaha iKaizer Chiefs esicongweni.
Ngemuva komdlalo neMamelodi Sundowns uHunt, obeselilahlile ithemba kwisicoco seligi nyakenye, uthe empeleni sisakhona isikhathi sokufica iChiefs eshiya iWits ngamaphuzu awu-14, kodwa inemidlalo emine esandleni.
"Ukude kabi uMeyi. Isikhathi esiphakathi kwamanje noMeyi side kakhulu. Kuningi okusazokwenzeka ngale midlalo esele. Asikafiki ngisho kuhhafu wesizini ngakho-ke obona ukuthi usewinile simfisela inhlanhla," kusho uHunt.